“ ကိုဗဈကာကှယျဆေးထိုးနိုငျခဲ့တဲ့ မွနျမာနိုငျငံသား အမရေိကနျရောကျ ဆရာဝနျDr. ကြျောဇောဟိနျး ” – Khit Thit Lann
“ ကိုဗဈကာကှယျဆေးထိုးနိုငျခဲ့ပွီဖွဈတဲ့အပွငျ ဆေးအာနိသငျအကွောငျးမြှဝလောတဲ့ မွနျမာနိုငျငံသား အမရေိကနျရောကျ ဆရာဝနျDr. ကြျောဇောဟိနျး ”
ကာကှယျဆေး ဘယျလောကျကောငျးလဲ ဘယျသူတှေ ထိုးနိုငျလဲဘာတှေ ပွငျဆငျထား
သငျ့လဲဆိုတာကို မွနျမာလို အတိုခြုပျ ဘာသာပွနျရေးသားလိုကျပါတယျ ခငျဗြာ။
(၁) ဆေးအာနိသငျ ဘယျလောကျကောငျးလဲ ?
Pfizer ကာကှယျဆေးက ကိုဗဈ−၁၉ ကို တားဆီးနိုငျစှမျးရှိပါတယျ။လူ ၄၀,၀၀၀
(လေးသောငျး) ကြျောပါဝငျတဲ့ ဆေးသိပ်ပံ စမျးသပျခကျြအရ ဆေးထိုးထားလြှငျ ကိုဗဈ
ရောဂါကို ၉၅ % တားဆီးနိုငျစှမျး ရှိပါတယျ(ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့က . သတျမှတျ
ထားတဲ့၇၀% ထကျ မြားစှာပိုကောငျးပါတယျ.)
ကာကှယျဆေးကို ၁၆ နှဈပွညျ့ပွီးသူမြားတှငျ ၂၁ ရကျခွားပွီး ၂ ကွိမျထိုးနိုငျပါတယျ ။
Pfizer ကုမ်ပဏီထုတျ ကာကှယျဆေးမြားနဲ့ ဓါတျမတညျ့သူမြား၊ရကျ ၉၀ အတှငျး ကိုဗ
ဈ ဖွဈဖူးသူမြား၊ကိုဗဈ သံသယ လူနာမြား၊ကိုယျခံအားနညျး ရောဂါရှငျမြား၊သှေးကြဲ
ဆေး သောကျနသေူမြား၊နို့တိုကျမိခငျမြား ၊ ကိုယျဝနျဆောငျမြား
မှတျခကျြ။ အထကျပါအုပျစုမြားမှာ ဆရာဝနျထောကျခံလြှငျ ဆေးထိုးနိုငျပါတယျ။
ဆေးထိုးသညျ့နရောတှငျ နာကငျြ (သို့) အောငျ့ နခွေငျး၊ဆေးထိုးသညျ့နရောတှငျ
ကနြျောကိုယျတိုငျ ဆေးထိုးပွီးနောကျ လကျမောငျးအောငျ့သလို ခံစားရပွီး၊ နောကျ
(၅)ဆေးဓါတျမတညျ့ခွငျး (allergic reaction) ဖွဈရငျတော့ နီးစပျရာ ဆေးရုံကို အ
ကပျရောဂါကွီး နိဂုံးခြုပျပွီး ပုံမှနျ အနအေထားပွနျရောကျဖို့ မွနျမာနိုငျငံကို ‘ဆေး’ အ
“ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အပြင် ဆေးအာနိသင်အကြောင်းမျှဝေလာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား အမေရိကန်ရောက် ဆရာဝန်Dr. ကျော်ဇောဟိန်း ”
ကာကွယ်ဆေး ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ ဘယ်သူတွေ ထိုးနိုင်လဲဘာတွေ ပြင်ဆင်ထား
သင့်လဲဆိုတာကို မြန်မာလို အတိုချုပ် ဘာသာပြန်ရေးသားလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
(၁) ဆေးအာနိသင် ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ ?
Pfizer ကာကွယ်ဆေးက ကိုဗစ်−၁၉ ကို တားဆီးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။လူ ၄၀,၀၀၀
(လေးသောင်း) ကျော်ပါဝင်တဲ့ ဆေးသိပ္ပံ စမ်းသပ်ချက်အရ ဆေးထိုးထားလျှင် ကိုဗစ်
ရောဂါကို ၉၅ % တားဆီးနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်(ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က . သတ်မှတ်
ထားတဲ့၇၀% ထက် များစွာပိုကောင်းပါတယ်.)
ကာကွယ်ဆေးကို ၁၆ နှစ်ပြည့်ပြီးသူများတွင် ၂၁ ရက်ခြားပြီး ၂ ကြိမ်ထိုးနိုင်ပါတယ် ။
(၃) ဆေး ‘မ’ ထိုးသင့်သူများ
Pfizer ကုမ္ပဏီထုတ် ကာကွယ်ဆေးများနဲ့ ဓါတ်မတည့်သူများ၊ရက် ၉၀ အတွင်း ကိုဗ
စ် ဖြစ်ဖူးသူများ၊ကိုဗစ် သံသယ လူနာများ၊ကိုယ်ခံအားနည်း ရောဂါရှင်များ၊သွေးကျဲ
ဆေး သောက်နေသူများ၊နို့တိုက်မိခင်များ ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ
မှတ်ချက်။ အထက်ပါအုပ်စုများမှာ ဆရာဝန်ထောက်ခံလျှင် ဆေးထိုးနိုင်ပါတယ်။
ဆေးထိုးသည့်နေရာတွင် နာကျင် (သို့) အောင့် နေခြင်း၊ဆေးထိုးသည့်နေရာတွင်
ကျနော်ကိုယ်တိုင် ဆေးထိုးပြီးနောက် လက်မောင်းအောင့်သလို ခံစားရပြီး၊ နောက်
(၅)ဆေးဓါတ်မတည့်ခြင်း (allergic reaction) ဖြစ်ရင်တော့ နီးစပ်ရာ ဆေးရုံကို အ
ကပ်ရောဂါကြီး နိဂုံးချုပ်ပြီး ပုံမှန် အနေအထားပြန်ရောက်ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံကို ‘ဆေး’ အ